पहिलो यौन सम्बन्धका बारेमा के सोच्छन महिला ? | karnalikhabar.com
पहिलो यौन सम्बन्धका बारेमा के सोच्छन महिला ? – karnalikhabar.com
प्रकाशित मिति :2017-01-05 07:19:28 स्त्रीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौन अनुभव गर्न चाहने देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउँने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । युवतीहरुले यौनको बारेमा कस्ता कस्ता कुरा सोच्छन् भन्ने विषयको अध्ययनको निष्कर्ष यस्तो छ।